यस्तो निर्णय गर्न अकस्मात प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, अब के होला स्थिती ? - Onlines Time
यस्तो निर्णय गर्न अकस्मात प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, अब के होला स्थिती ?
December 7, 2020 by onlinestime
रातको करिब साढे एक बजेको थियो। खाना खाएर घरमा सबै सुतिसकेका थियौ मध्यराति फोनको घण्टी बजेपछि झल्यास्स.. बिउँझिएँ र फोन उठाएँ’ बोगटान फुड्सील गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष देवबहादुर बमले भने।
उनको छोरालाई गाउँपालिका उपाध्यक्षले आफ्नै गाडीमा राखेर अस्पताल लग्नुभएको थियो, दुर्भाग्य बाँच्ने आशा राखिएका ती बालकको पनि उपचार्थ लैजाने क्रममा मृत्यु भयो। २७ वर्षीया मञ्जु त्रिपाठीले एक वर्षअगाडि मात्रै लोकसेवामा नाम निकालेकी थिइन्। सरकारी सेवामा प्रेवश गरेपछि करिब नौ महिनादेखि बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–७ को वडा कार्यालयमा वडा सचिव पदमा कार्यरत मञ्जु हप्तादिनको बिदा लिएर घर गएकी थिइन्।
बिदा सक्काएर कर्मथलो फर्कंदै गर्दा शनिबार राति बाटोमै कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भएकी छिन्। बैतडीको दुर्गम गाउँबाट सरकारी सेवामा प्रेवश गर्ने उनी गाउँकी पहिलो महिला थिइन्।उनीहरूसँगै ग्रामीण जलस्रोत परियोजनामा कार्यरत केआईसिंह गाउँपालिका–४ का ३३ वर्षीय हरिहर नारायण भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
यस्तै, चार जना घाइतेहरुको दिपायलस्थित शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते हुनेहरुमा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका ७ का ३६ वर्षीय टिकाराम गिरी, वर्ष २८ की उनकी श्रीमती खेमा गिरी, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १९ का २८ वर्षीय हेमन्त भट्ट र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका कै वडा नम्बर ६ का २६ वर्षीय चालक कैलाश बम रहेका छन्। जिपमा चालकसहित आठजना सवार रहेका थिए। चालक निदाएका कारण जिप दुर्घटनामा परेको घाइतेहरुको भनाइ छ।
Prevमाइतीघरमा पूर्व जर्नेल माथि एस्तो सम्म भयो ? अन्तर्वातामै भयो purba jarnel Dr. prem singh basnyat
Nextरमेशको बिहेको दिन कल्पना यस्तो ड्रेसमा Ramesh Prasai, Nanda Sing , Kalpana Dahal